Home News Ciidanka Booliska oo toogtay Shabab ay nolol ku qabteen (Yaa Amaray)
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ay ka sameeyeen Guri ku yaalla Xaafad ka tirsan degmada Warta-Nabadda ee Gobolka Banaadir,kadib markii gurigaas uu galay Nin hubeysan.
Gelinkii dambe ee galabta ayaa Ninkaas oo ku hubeysnaa Bambooyin uu ku weeraray fariisimo Ciidanka dowladda ay ku leeyihiin Xaafada Furayaasha ee degmadaas,isla markaana ay soo Eryadeen Ciidanka,hayeeshee markii dambe uu galay guri ay leeyihiin Dad shacab ah.
Ciidanka ayaa isku gadaamay guriga uu galay Ninkaas oo ku yaalla Xaafada Cali Kamiin ee Warta-Nabadda,isagoo la sheegay in dhowr daqiiqo uu dhex dagaalamayay, bambooyina uu ku soo tuurayay Ciidamadii ku hareereysnaa.
Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay MOL ayaa u sheegay in Ciidanka markii ay dambe Ninka hubeysnaa ay lugta ka tootgeen,iyagoona horey u watay.
Warar qaar ayaa sheegaya in Ciidankii la dagaalamayay ninkaas Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir uu amar ku bixiysay in aan la dilin,balse ay gacanta ku soo dhigaan isaga nool.
Previous articleMuxuu salka ku haya kulanka caawa ee MW Farmaajo iyo xildhibaanada beesha Daarood
Next articleTrump vetoes resolution to end U.S. participation in Yemen’s civil war
Gudoomiye Yariisoow”Dadkii banaanbaxyada dhigay waan maxkamadeeyn doonaa”